नेपाललार्इ सप्तकोसी उच्च बाँध आवश्यक छ कि छैन् ? || सुनौलो नेपाल
नेपाललार्इ सप्तकोसी उच्च बाँध आवश्यक छ कि छैन् ?
देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणपछि ‘कोसी उच्च बाँध
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणपछि ‘कोसी उच्च बाँध’ को चर्चा फेरि चुलिएको छ । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा यो बाँधलाई सहमति दिएदेखि यो परियोजना विवादमा छ । यसले पार्ने डुबान र विस्थापनका कारण यो विवादित बनेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणको क्रममा यस बाँधबारे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न दुवै देशले गति दिने सहमति भएपछि विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भएका छन् । यही विषयलाई लिएर अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको दैनिक पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्ट् र टेलिभिजन एपीवानले संयुक्त रूपमा राउन्ड टेबल बहस आयोजना गरेको थियो । पूर्व ऊर्जासचिव शीतलबाबु रेग्मी, जलस्रोतविद् अरुणकुमार सुवेदी, अन्नपूर्ण पोस्ट्का समाचार सम्पादक विकास थापा, संवाददाता लक्ष्मण श्रेष्ठ सम्मिलित सो बहसको सहजीकरण एपीवानका समाचार प्रमुख टीकाराम यात्रीले गरेका थिए । राउन्ड टेबल वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ, यो वार्ता एपीवान टेलिभिजनमा शनिबार बेलुका साढे ६ बजे र आइतबार दिउँसो दुई बजे हेर्न सकिनेछ ।
अम्पायरप्रति अभद्र व्यवहार गरेपछि विराट कोहलीलाई आइसिसीले गर्यो यस्तो जरिवाना